अर्थ / वाणिज्य Archives - पब्लिक पाेष्ट
शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा ९ अङ्कको सुधार
July 12, 2020 July 12, 2020 EP EDITORLeaveaComment on शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा ९ अङ्कको सुधार
काठमाण्डौ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार सामान्य बढेको छ । नेप्से आज ९ दशमलव शून्य २ अङ्कले बढेर १३ सय ४० दशमलव २९ बिन्दुमा पुगेको छ । जलविद्युत्, होटल, बैंक, विकास बैंक र म्युचल फण्डबाहेक अरु समूहको शेयर सामान्य बढेको छ । आइतबार जीवन बीमा समूहको शेयर १ सय ९५ अङ्कले, निर्जीवन बीमा समूहको […]
नेपालमै पहिलो पटक बिज्हबले सुरु गर्‍यो अनलाईन तयारी कक्षा
September 17, 2019 September 17, 2019 EP EDITORLeaveaComment on नेपालमै पहिलो पटक बिज्हबले सुरु गर्‍यो अनलाईन तयारी कक्षा
काठमाण्डौ । गरिब र जेहेन्दार बिधार्थीहरुलाई लक्षित गरि समय र पैसाको बचत होस् भन्ने मनसायले बिज्हब आइटी सर्भिस प्रा. लि. ले नेपालमै पहिलोपटक घरमै बसेर अध्यन गर्न मिल्ने व्यबस्थाको साथ www.ottish.com | Learn Anywhere, Anytime नामको अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत विभिन्न विधाका अनलाईन तयारी कक्षाहरु संचालन गरेको जानकारी दिएको छ । संस्थाका प्राबिधिक निर्देशक सन्तोष भट्टराईले हामीलाई […]
यस्तो छ राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ सहित)
July 24, 2019 July 26, 2019 EP EDITORLeaveaComment on यस्तो छ राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिको प्रमुख हाइलाइट वाणिज्य बैंकहरूको मर्जर रहेको छ । मौद्रिक नीतिमा २०७७ आषाढ मसान्तसम्म मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई विभिन्न सेवामा सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै मर्जरमा जाने लघुवित्त कम्पनीहरुलाई पनि विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै मौद्रिक […]
सञ्चित कोष दुई खर्ब घाटामा: आम्दानी नौ खर्ब ६ अर्ब, खर्च १० खर्ब ९३ अर्ब
July 23, 2019 EP EDITORLeaveaComment on सञ्चित कोष दुई खर्ब घाटामा: आम्दानी नौ खर्ब ६ अर्ब, खर्च १० खर्ब ९३ अर्ब
काठमाडौं। संघीय सरकारको सञ्चित कोष (ट्रेजरी) ठूलो घाटामा देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा संघीय सरकारको ट्रेजरी अवस्था दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। सरकारको यथार्थ खर्चमा नगद मौज्दात भए पनि संघीय सरकारबाट तल्लो तहको सरकारमा फन्ड ट्रान्सफर भएपछि संघीय सरकारको खर्चमा देखिन्छ। ‘यो हाम्रो बजेटको लेखा प्रणालीमा समस्या पनि […]
July 21, 2019 EP EDITORLeaveaComment on हिमाल दोलखाको आइपीओमा २५ लाख ९० हजार कित्ताका लागि पर्यो आवेदन
काठमाडौं । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको आइपीओमा २५ लाख ९० हजार ४१० कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार आइतबार बिहानसम्म ५९ हजार ४२८ जनाले २५ करोड ९० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको आइपीओ भरेका छन् । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको आइपीओमा साउन २४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । तर यसबीचमा […]
July 15, 2019 EP EDITORLeaveaComment on पुँजी बजारमा सुधारको संकेत
काठमाडौं। पुँजी बजारमा सुधारको संकेत देखिएको छ । अब नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लागेकाले पनि बजारमा विस्तारै माहोल आउने अनुमान गरिएको छ । असार मसान्तमा कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दबाब पर्ने भएकाले पनि बजार निकै सुस्त रहन गएको अनुभवीहरुको भनाई छ । साउन लागेसँगै बजारले क्रमशः गति लिने अपेक्षा बढेको छ । साउनपछि […]
आज पनि सेयरबजारमा गिरावट
July 11, 2019 EP EDITORLeaveaComment on आज पनि सेयरबजारमा गिरावट
काठमाडौ । आज पनि सेयरबजारमा गिरावट आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार साताको अन्तिम कारोबार दिन आज बजार कारोबार मापक सूचक शून्य दशमलव ६२ अंकले ओरालो लागेको हो। अघिल्लो दिन पनि सेयरबजार घटेको थियो। आज सूचक १२४८.५३ अंकमा सीमित भएको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ सूचक पनि शून्य दशमलव शून्य एक अंकले ओर्लिएको […]
मर्जरमा जान तयार हुने बैंकको संख्या २३ पुग्यो, कुन–कुन हुन् हेर्नुहोस् लिस्ट?
July 11, 2019 July 12, 2019 EP EDITORLeaveaComment on मर्जरमा जान तयार हुने बैंकको संख्या २३ पुग्यो, कुन–कुन हुन् हेर्नुहोस् लिस्ट?
काठमाडौं। मर्जरका लागि प्रतिवद्धता जनाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्न थालेको छ । यसैबीच, २० वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरका लागि प्रतिवद्धता सहितको पत्र केन्द्रीय बैंकमा पठाएका छन् । यस्तै, ३ वटा विकास बैंकले पनि केन्द्रीय बैंक सामु मर्जरका लागि प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, सरकारी लगानीका ३ र अन्य ५ वाणिज्य बैंक भने मौन […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै
July 10, 2019 EP EDITORLeaveaComment on नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २६ गते बोलकबोल मार्फत १२ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ । ‘विकास ऋणपत्र २०८१ ग’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्र ५ वर्षका लागि जारी गर्न लागेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसको ब्याजदर भने बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ । यो ऋणपत्र असार २६ गते अपरान्ह ३ बजे बोलकबोल […]
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक पनि मर्जमा जान तयार, शुक्रबार एजीएम बस्ने
July 9, 2019 EP EDITORLeaveaComment on कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक पनि मर्जमा जान तयार, शुक्रबार एजीएम बस्ने
काठमाडौं। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले असार २७ गते शुक्रबार साधारण सभा बोलाएको छ । सभामा २०७४–७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने, नाफा नोक्सानको हिसाब गरी पारित गर्ने लगायतका एजेन्डा रहेका छन् । यस्तै, लेखापरीक्षक नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने एजेन्डा पनि छ । बैंकले लाभांश वितरण सम्बन्धी भने कुनै पनि एजेन्डा बनाएको छैन । यसैगरी, कर्पोरेटसँग […]